+०+ उत्तम सोच प्रोल्किंग माल्कम एक्स उद्धरण - व्यक्तिगत विकास क्याफे
+०+ उत्तम सोच माल्कम एक्स उद्धरण
पोस्ट व्यवस्थापक | अक्टोबर 23, 2020 | उद्धरण |0|
1 माल्कम एक्स हिंसा मा उद्धरण
1.1 समानता र स्वतन्त्रता मा माल्कम एक्स कोट्स
1.2 शिक्षा मा माल्कम एक्स द्वारा उद्धरण
1.3 माल्लकम एक्स रेसिसमा उद्धरण
1.4 माल्कम एक्स धर्म मा उद्धरण
1.5 इस्लाम नेता एलिजा मुहम्मदको राष्ट्रमा माल्कम एक्स कोट्स
1.6 माल्कम एक्स मृत्युमा उद्धरण
1.6.1 माल्कम एक्स र मार्टिन लुथर कि
1.6.2 माल्कम एक्स कोट्स डायरेक्ट डा मार्टिन लूथर किंग
माल्कम एक्स निस्सन्देह इतिहासको सबैभन्दा प्रभावशाली अफ्रिकी अमेरिकी हो। यद्यपि उसको प्रभाव र महत्त्व विगतमा सीमित छ र सधैं भनिएको हुँदैन।
त्यसकारण हामीले केही उत्तम मल्कम एक्स उद्धरणहरू सूचीबद्ध गर्नु अघि, उहाँको जीवनको संक्षिप्त सारांश यहाँ छ।
माल्कम लिटिलको जन्म मे १,, १ 19 २। मा नेब्रास्काको ओमाहामा भएको थियो। उनका बुबा अर्ल लिटिल, प्रचारक र कट्टर समर्थक थिए जमैका कालो राष्ट्रवादी नेता मार्कस गार्वे.
छ वर्षको उमेरमा माल्कमका बुबा मारिए, शिकार, - उनी विश्वास गर्थे - एक सेतो जातिवादी समूहको। १ 13 वर्षको उमेरमा माल्कमकी आमा लुइस नर्भस ब्रेकडाउनमा परेको संस्थामा प्रतिबद्ध थिए (२० भन्दा बढी वर्ष पछि माल्कम र उनका भाइबहिनीहरूले उनलाई रिहा गरे)।
माल्कम र उनका भाइबहिनीहरूलाई अलग-अलग फोस्टर होम र सुधार स्कूलहरूमा सेता अभिभावकहरूले हुर्काए। उसको प्रारम्भिक जीवनले उनलाई कसरी प्रभावित गर्यो यी दुई माल्कम एक्स उद्धरणको व्याख्या गर्न सक्छ:
“जीवनको सुरुमै मैले यो सिकेको छु कि यदि तपाईं केहि चाहनुहुन्छ भने तपाईंले केही हल्लाउनु राम्रो हुन्छ।”
“सामान्यतया, जब मानिसहरू दु: खी छन्, तिनीहरूले केहि गर्दैनन्। तिनीहरू केवल आफ्नो अवस्थाको लागि रोउँछन्। तर जब तिनीहरू रिसाउँछन्, तिनीहरूले परिवर्तन ल्याउँदछन्। ”
१ 1946 .XNUMX मा डकैतीको लागि जेल सजाय पाउँदा, माल्कमलाई परिचय गराइयो र इस्लाम राष्ट्रको सदस्य भयो।
"एक पल्ट एक आपराधिक भएको छ कुनै अपमानजनक छैन। एक आपराधिक रहन अपमानजनक छ। "
जेलबाट छुटेपछि माल्कमले शिकागोमा एलिया मुहम्मदलाई भेटे र १ 1953 .XNUMX मा डेट्रोइटमा राष्ट्रको मन्दिर नम्बर एकका सहायक मन्त्री बने।
उनी माल्कम एक्स भनेर चिनिन थाले कि “एक्स” ले साँचो अफ्रिकी परिवारको नामलाई चिन्ह लगायो जुन उसलाई कहिल्यै थाहा छैन।
माल्कम एक्स हिंसा मा उद्धरण
यदि तपाइँ अर्को गाला पल्टाउनु भयो भने, तपाइँ १,००० बर्षको लागि दास बनाउन सक्नुहुन्छ।
यदि हिंसा अमेरिका मा गलत छ, हिंसा विदेश मा गलत छ। यदि कालो महिला र कालो बच्चाहरू र कालो बच्चाहरू र कालो मान्छेहरूको हिंसात्मक प्रतिवाद गर्नु गलत हो भने, अमेरिकाले हामीलाई ड्राफ्ट गर्नुका साथै विदेशमा हिंस्रक बनाउनु गलत हो। र यदि अमेरिकाले हामीलाई मस्यौदा तयार पार्नु छ, र कसरी उनको हिंस्रक हुन भनेर हामीलाई सिकाउँछ भने, तपाईं र म यहाँ यस देश मा हाम्रो आफ्नै मान्छे को रक्षा गर्न केहि गर्न को लागी सही छ।
कुनै पनि बुद्धिमानको लागि अहिंसात्मक हुन गाह्रो छ।
हामी ती मानिसहरूसँग हिंस्रक छौँ जुन हामीसँग अहिंसक छन्।
अहिंसा जबसम्म यो काम गर्दछ ठीक छ।
म यसलाई हिंसा पनि भन्न सक्दिन जब यो आत्म बचावमा छ; म यसलाई बुद्धिमत्ता भन्छु।
अहिंसाको सम्बन्धमा, कुनै व्यक्तिलाई क्रुर हमलाको निरन्तर शिकार हुने बित्तिकै आफ्नो रक्षा नगर्न सिकाउनु अपराधी हो।
समानता र स्वतन्त्रता मा माल्कम एक्स कोट्स
यो दासत्व र जेल पछि मात्र स्वतन्त्रताको सबैभन्दा मीठा प्रशंसा आउन सक्छ।
हामी अब स्वतन्त्रता चाहान्छौं, तर हामी यसलाई 'Well Shall Overcome' भन्दै पाउँदैनौं। हामीले जित्नको लागि संघर्ष गर्नुपर्‍यो।
हामी यस पृथ्वीमा हाम्रो मानव अधिकारको रूपमा घोषणा गर्दछौं, मानवको रूपमा सम्मान हुने छ, यस समाजमा, यस पृथ्वीमा, आजको दिनमा पनि हामी मानवअधिकारको अधिकार पाउनेछौं, जुन हामी अस्तित्वमा ल्याउन चाहन्छौं कुनै पनि तरिका आवश्यक छ।
कसैले तपाईलाई स्वतन्त्रता दिन सक्दैन। कसैले तपाईलाई समानता वा न्याय वा केहि दिन सक्दैन। यदि तपाईं एक मानिस हुनुहुन्छ भने, तपाईं यसलाई लिनुहोस्।
जब एक व्यक्ति स्वतन्त्रताको उचित मूल्य राख्छ, सूर्यमुनि केहि पनि छैन कि त्यो स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न उसले गर्ने छैन।
जब तपाईले कुनै मानिसलाई सुन्नुहुन्छ कि उसले स्वतन्त्रता चाहान्छ, तर अर्को सासमा उसले तिमीलाई भन्दछ कि उसले के प्राप्त गर्न को लागी गर्छ, वा उसले प्राप्त गर्न के गर्न उसले विश्वास गर्दैन, उसले गर्दैन स्वतन्त्रता मा विश्वास
स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्ने मानिसले सूर्यको नियन्त्रणमा प्राप्त गर्न केहि पनि गर्न सक्दछ। । । वा उसको स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नुहोस्।
म विश्वास गर्दछु अन्तमा उत्पीडन र दमन गर्नेहरु बीच झगडा हुनेछ। म विश्वास गर्दछु कि सबैका लागि स्वतन्त्रता, न्याय र समानता चाहने र शोषणको प्रणालीलाई निरन्तरता दिन चाहने मानिसहरु बीच झगडा हुनेछ।
यदि तपाईं यसको लागि मर्न तयार हुनुहुन्न भने, शब्दलाई तपाईंको शब्दावली बाहिर 'स्वतन्त्रता' राख्नुहोस्।
तपाईं स्वतन्त्रताको लागि लड्न एक मानिस हुनु आवश्यक छैन। तपाईले गर्नु पर्ने भनेको एक बुद्धिमान मानिस हुनु हो।
डा। राजा पनि मलाई चाहानुहुन्छ। स्वतन्त्रता।
तपाईले शान्तिलाई स्वतन्त्रताबाट अलग गर्न सक्नुहुन्न किनकि उसको स्वतन्त्रता नभएसम्म कोही पनि शान्तिमा बस्न सक्दैन।
एक मानिस जो केही चीजको लागि खडा हुन्छ कुनै चीजको लागि तल झर्छ।
ठेस लाग्ने होइन।
अमेरिका मा यहाँ हुनु तपाईलाई अमेरिकी बनाउँदैन। अमेरिकामा जन्म भएकोले तपाईंलाई अमेरिकी बनाउँदैन।
हामी अमेरिकी होइनौं, हामी अफ्रिकी छौं जो अमेरिकामा हुन्छन्। हामीलाई अपहरण गरियो र अफ्रिकाबाट हाम्रो इच्छा विरुद्ध यहाँ ल्याइयो। हामी प्लाइमाउथ रकमा उत्रेनौं - त्यो चट्टान हामीमा उत्रियो।
जुन दिन काला मानिसले कुनै सम्झौता नगरी कदम चाल्छ र महसुस गर्छ कि ऊ आफ्नो अधिकार भित्र छ, जब उसको स्वतन्त्रता खतरामा छ, आफ्नो स्वतन्त्रता ल्याउनको लागि कुनै पनि साधनको प्रयोग गर्न वा त्यो अन्याय रोक्न, मलाई लाग्दैन ऊ 'म आफैं हुन सक्छु।
मानवाधिकारहरू त्यस्तो कुरा हुन् जुन तपाईंसँग जन्म भएको थियो। मानव अधिकार तपाईंको ईश्वरले दिएका अधिकार हुन्।
शिक्षा मा माल्कम एक्स द्वारा उद्धरण
मेरो अल्मा मेटर पुस्तकहरू थिए, एउटा राम्रो पुस्तकालय ... म आफ्नो बाँकी जीवन पढ्न सक्दछु, मेरो जिज्ञासालाई सन्तुष्ट पार्दै।
म एक विश्वास गर्दछु कि यदि तपाईले मानिसहरुलाई तिनीहरुको सामना गर्ने र यसको उत्पादन गर्ने आधारभूत कारणहरुको बारेमा पूर्ण समझ दिनुहुन्छ भने तिनीहरुले आफ्नै प्रोग्राम बनाउँनेछन्, र जब व्यक्तिले प्रोग्राम बनाउँदछन तपाई कार्य पाउनुहुन्छ।
भविष्य तिनीहरूकै हो जो आज यसका लागि तयारी गर्छन्।
शिक्षा बिना, तपाईं यस संसारमा कतै जाँदै हुनुहुन्न।
पाठ्यपुस्तकहरूले हाम्रा बच्चाहरूलाई यस देशको विकास र विकासमा अफ्रो-अमेरिकनको ठूलो योगदानको बारेमा केही पनि बताउँदैन।
तपाईं राम्रो इच्छा कानून बनाउन सक्नुहुन्न - त्यो शिक्षाको माध्यमबाट आउँछ।
निन्दा गर्नमा हतार नगर्नुहोस् किनभने उसले के गर्छ वा सोच्दैन जस्तो गरी गर्छ वा छिटो गर्दछ। एउटा समय थियो जब तपाईलाई आज थाँहा के हुन्छ थाहा थिएन।
दुःखकष्ट भन्दा राम्रो त्यहाँ छैन। प्रत्येक पराजय, हरेक हार्टब्रेक, प्रत्येक घाटा, यसको आफ्नै बीज, अर्को पटक तपाईंको प्रदर्शनलाई कसरी सुधार गर्ने भन्नेमा आफ्नै पाठ समावेश गर्दछ।
माल्लकम एक्स रेसिसमा उद्धरण
विगतमा, सेतो मानिससँग भएको सब भन्दा ठूलो हतियार विभाजन गर्न र जित्ने क्षमता थियो।
म एक जातिय होइन। म सबै प्रकारको जात र भेदभावको बिरूद्ध छु, बिभिन्न प्रकारको भेदभावको छु। म मानिसमा विश्वास गर्दछु, र ती सबै मानिसहरुको जस्तो सम्मान गर्नुपर्दछ, उनीहरूको रंग जस्तोसुकै भए पनि।
हो, म एक कट्टरपन्थी हुँ। यहाँ उत्तर अमेरिका मा कालो दौड धेरै खराब अवस्था मा छ। तपाईं मलाई एक कालो मानिस देखाउनुहोस् जो कट्टरपन्थी होइन र म तपाईंलाई मानसिक शोषणको आवश्यकता भएको एक व्यक्ति देखाउनेछु!
म मानिस, सबै मानिसहरुमा रहेको भाइचारामा विश्वास गर्दछु, तर म कसैलाई पनि भ्रातृत्वमा विश्वास गर्दिन
म मान्छेहरु लाई सहि व्यवहारमा विश्वास गर्दछु, तर मेरो समय बर्बाद हुने छैन कसैको सहि उपचार गर्ने प्रयास गर्दै जसलाई उपचार फिर्ता कसरी थाहा गर्ने थाहा छैन।
म के जान्न चाहन्छु कि सेतो मानिस कसरी कालो मान्छेको रगतको साथ आफ्नो औंलाहरु टिपेर छ, काली मानिसहरू सोधेर साहसी हुन सक्छ कि तिनीहरू उसलाई घृणा गर्छन्? त्यसले धेरै स्नायु लिन्छ।
२२ करोड अफ्रो-अमेरिकनको साझा लक्ष्य भनेको मानवको रूपमा सम्मान हो, ईश्वरले मानव अधिकार पाउनुभएको अधिकार हो। हाम्रो साझा लक्ष्य अमेरिकाले हामीलाई अस्वीकार गरेको मानवअधिकार प्राप्त गर्नु हो। हामी अमेरिकामा नागरिक अधिकारहरू कहिले पनि प्राप्त गर्न सक्दैनौं जबसम्म हाम्रो मानव अधिकार पहिलो पटक पुनर्स्थापित हुँदैन। हामी मानवको रूपमा पहिचान नभएसम्म हामी त्यहाँका नागरिकहरूको रूपमा कहिले पनि पहिचान हुनेछैनौं।
मानिसहरुको दौड एक व्यक्ति को जस्तै छ; जबसम्म यसले आफ्नै प्रतिभा प्रयोग गर्दैन, आफ्नै इतिहासमा गर्व लिन्छ, आफ्नै संस्कृतिलाई अभिव्यक्त गर्दछ, आफ्नै स्वार्थको पुष्टि गर्दछ, यो आफैंले कहिल्यै पूरा गर्न सक्दैन।
म सत्यको लागि हुँ, कुनै कुराको फरक पर्दैन। म न्यायको लागि हुँ, यसको पक्ष वा विपक्षमा पर्दैन।
यदि तपाईंसँग आलोचकहरू छैनन् भने, तपाईंसँग सम्भवत सफलता छैन।
माल्कम एक्स धर्म मा उद्धरण
मान्छेलाई थाहा छैन कि कसरी एउटा मान्छेको पूरै जीवन एक पुस्तक द्वारा परिवर्तन गर्न सकिन्छ।
म स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्ने धर्ममा विश्वास गर्दछु। कुनै पनि समय मैले मेरो धर्म स्वीकार्नुपर्दछ जसले मलाई मेरा मानिसहरूका लागि युद्ध लड्न दिदैन, म त्यो धर्म संग नरकमा भन्छु।
हाम्रो पुस्तक कुरानमा त्यस्तो केही छैन जुन हामीलाई शान्तिपूर्वक पीडित हुन सिकाउँछ। हाम्रो धर्मले हामीलाई बौद्धिक हुन सिकाउँछ। शान्त हुनुहोस्, शिष्ट हुनुहोस्, कानूनको पालना गर्नुहोस्, सबैलाई आदर गर्नुहोस्; तर यदि कसैले तपाइँमाथि आफ्नो हात राख्छ भने, त्यसलाई चिहानमा पठाउनुहोस्। त्यो राम्रो धर्म हो।
ब्ल्याक मुस्लिम आन्दोलनलाई बढ्तो बनाउने एउटा चीजमा यसको अफ्रिकी चीजहरूमा जोड थियो। यो कालो मुस्लिम आन्दोलनको विकासको रहस्य थियो। अफ्रीकी रगत, अफ्रिकी मूल, अफ्रिकी संस्कृति, अफ्रिकी सम्बन्ध। र तपाईं छक्क पर्नुहुनेछ - हामीले पत्ता लगायौं कि यस देशमा कालो मानिस अवचेतनामा रहेको छ, ऊ अझै अमेरिकन भन्दा अफ्रिकी छ।
इस्लाम नेता एलिजा मुहम्मदको राष्ट्रमा माल्कम एक्स कोट्स
म त्यस्तो मानिस जस्तो महसुस गर्छु जो निद्रामा परेको छ र कसैको नियन्त्रणमा थियो। मलाई लाग्छ कि म के सोच्दैछु र जे भन्छु मेरो लागि हो। यो पहिले एलिया मुहम्मदको मार्गदर्शनको लागि थियो र हो। अब म मेरो आफ्नै दिमागले सोच्छु, सर!
ब्ल्याक मुस्लिम आन्दोलनमा हामी उनीहरुको बारेमा तपाईले बुझ्नु पर्ने कुरा यो थियो कि हामी सबैले एलिया मुहम्मदको ईश्वरत्वमा १०० प्रतिशत विश्वास गरेका थियौं। हामी उहाँमा विश्वास गर्छौं। हामी वास्तवमा विश्वास गर्छौं कि डेट्रायटमा ईश्वरले उसलाई र सबै कुरा सिकाउनुभएको थियो। म सधैं विश्वास गर्दछु कि ऊ आफैमा विश्वास गर्छ। र जब म आफैले थाहा पाएँ कि ऊ आफैंले यो विश्वास गरेन।
मैले त्यस्तो इमान्दार र निर्दोष नेग्रोलाई गरेको क्षतिलाई मद्दत नगरे सम्म म कहिले विश्राम गर्ने छैन जबसम्म मेरो आफ्नै ईभान्जेलिस्टिक जोसका कारणले ममा भन्दा बढी कट्टर र अन्धाधुन्ध भएर उहाँमा विश्वास गर्दछ।
माल्कम एक्स मृत्युमा उद्धरण
मेरा पहिलेका भाइबहिनीहरूले महसुस गरे कि यदि उनीहरूले मलाई मारिदिए भने तिनीहरू आफैंलाई नायक बनाउनेछन् इस्लाम राष्ट्रमा।
र आज यस देशको जातीय वातावरणमा, यो कसैको पनि अनुमान छ कि कालो मानिसका समस्याहरूको सामना गर्न को लागी कुन “चरम सीमा” पहिले एक घातक प्रकोप भेट्न सक्छ - “अहिंसक” डा कि King, वा तथाकथित हिंसात्मक। 'म।
यो समय शहीदहरूका लागि हो, र यदि म एक भएको छु भने यो भाइचाराको लागि हुनेछ। त्यो मात्र चीज हो जुन यस देशलाई बचाउन सक्छ।
यो सधैं मेरो विश्वास भएको छ कि म पनि हिंसाले मर्नेछु। मैले तयारी गर्न सक्ने जति सबै गरें।
हरेक बिहान जब म उठ्छु, अब, म यसलाई अर्को उधारो दिन भएको मान्दछु।
कुनै पनि समय तपाईलाई थाहा छ कि तपाई कानूनको भित्र हुनुहुन्छ, तपाईको कानूनी अधिकार भित्र तपाईको नैतिक अधिकार भित्र तपाईको न्याय अनुसार, तब तपाई जे विश्वास गर्नुहुन्छ त्यसको लागि मर्नुहोस्। तर एक्लै मर्नु हुँदैन। तपाईको मृत्युलाई पारस्परिक हुन दिनुहोस्। यो के हो समानता बाट। हंसको लागि के राम्रो छ यो gender को लागी राम्रो छ।
उसले मलाई मर्न प्रयोग गर्नेछ, जसरी उसले मलाई जीवित बनायो, सुविधाजनक प्रतीकको रूपमा, “घृणा” - र त्यसले उसलाई सत्यको सामना गर्नबाट जोगिन मद्दत गर्दछ कि मैले गरिरहेको सबै कुरा दर्शाउनको लागि दर्पण हो, देखाउनको लागि, उहाँको दौडले मेरो दौडको विरूद्ध गरेको छ कि अकथनीय अपराधहरूको इतिहास।
माल्कम एक्स र मार्टिन लुथर कि
माल्कम एक्स र डा। मार्टिन लुथर कि १ 1950 .० र 60० को दशकमा संयुक्त राज्य अमेरिकाका दुई नागरिक अधिकार र कालो स्वतन्त्रताका नेताहरू मध्ये दुई थिए।
तर किनभने समाधानमा तिनीहरूको फरक दृष्टिकोणको कारण, अविश्वसनीय रूपमा दुईजना मात्र एक पटक छोटकरीमा भेला भए। मार्च १ 1964 XNUMX मा किंग र माल्कम दुबै सिनेटको सुनुवाईमा सार्वजनिक स्थानहरुमा छुट्टिनु र रोजगारीमा जातीय विभेद अन्त्य गर्ने कानुन सम्बन्धी कानूनमा थिए। उनीहरूले छोटकरीमा हात मिलाए।
माल्कम एक्स खुल्लमखुल्ला डा। राजाको अहिंसक, बहुजातीय दृष्टिकोणको आलोचना गरे। उनले १ 1963 XNUMX मार्चलाई वाशिंगटनमा बोलाए जहाँ डा कि Kingले आफ्नो प्रसिद्ध "मेरो सपना छ" भाषण दिए, "वाशिंगटनको प्रहसन।"
तिनीहरूको समयका यी दुई दिग्गजहरूले संयुक्त राज्य अमेरिकाको ध्यान खिचे। माल्कम एक्स को लागी एक प्रेरणा भएको थियो भनियो मार्वल एक्स-मेन चरित्र म्याग्नेटो, जबकि मार्टिन लुथर किंग प्रोफेसर एक्स को लागी एक प्रेरणा थियो।
माल्कम एक्स कोट्स डायरेक्ट डा मार्टिन लूथर किंग
निग्रो क्रान्ति सरकारले नै साना सेतो उदारवादीहरू द्वारा नियन्त्रण गर्दछ। तर कालो क्रान्ति क्रान्तिको नियन्त्रणमा रहेको छ।
उसले शान्ति पुरस्कार पायो, र हामीलाई समस्या भयो ... ... यदि म एक सामान्यलाई पछ्याउँदै छु, र उसले मलाई युद्धमा डोर्याइरहेको छ, र शत्रुले उसलाई पुरस्कृत गर्छ वा पुरस्कार दिन्छ, म उसको बारेमा श of्का गर्छु। विशेष गरी यदि युद्ध समाप्त हुनु अघि उसले शान्तिको पुरस्कार पाउँछ।
म उसको बिरूद्ध केही भन्न सक्दिन। कुनै समय संयुक्त राज्यमा गोरोले उनलाई जातीयवादी, चरमपन्थी र कम्युनिष्ट भनेका थिए। त्यसपछि कालो मुसलमानहरू आए र गोरेहरूले मार्टिन लूथर किंगको लागि प्रभुलाई धन्यवाद दिए।
“म डा। राजालाई यो कुरा जान्न चाहन्छु कि म सेल्मामा काम गर्न गाह्रो भएको होइन। मँ सजिलो बनाउन सक्ने सोचमा आएको हुँ। यदि गोरा व्यक्तिहरूले विकल्प के हो भन्ने बुझे भने, तिनीहरू डा। राजा सुन्न इच्छुक हुनेछन्। ”
तर उनीहरूको बिभिन्न विचारधाराको बाबजुद, माल्कम एक्सले विश्वास गरे कि उनी र डा कि King एउटै लक्ष्यमा लागेका छन्।
इस्लाम राष्ट्रबाट छुट्टिएपछि मल्कमले अन्य नागरिक अधिकार नेताहरूसँग काम गर्ने इच्छा व्यक्त गरे।
दुःखको कुरा, एक वर्ष भन्दा कम पछि उनलाई इस्लाम अफ इस्लामको सदस्यहरूले हत्या गरे।
माल्कमकी श्रीमती बेट्टी शाबाजलाई एउटा टेलिग्राममा उनको मृत्युको बारेमा सुनेपछि डा राजाले भनेः
“... म मल्कमलाई सधैं गहिरो स्नेह राख्थें र महसुस गर्थें कि ऊसँग आफ्नो समस्याको जडमा आफ्नो औंला राख्न सक्ने ठूलो क्षमता छ। उहाँ आफ्नो दृष्टिकोणको प्रख्यात प्रवक्ता हुनुहुन्थ्यो र माल्कमलाई हामीले दौडको रूपमा सामना गर्ने समस्याहरूको ठूलो चिन्ता थियो भनेर इमानदारीतासाथ कसैले शंका गर्न सक्दैन। ”
यदि तपाईंलाई यी माल्कम एक्स उद्धरणहरू मनपर्दछ भने, हामी तपाईंलाई दृढताका साथ सिफारिस गर्दछौं कि तपाईंले पढ्नुभयो माल्कम एक्सको आत्मकथा: एलेक्स हेलीलाई बताइएको , आफ्नो भाषणहरु, माल्कम एक्सको विकिपेडिया पृष्ठ र मानिसको अझ गहिराइ बुझ्नको लागि आफ्नो जीवनको अनुसन्धान गर्नुहोस्।
पछिल्लोतपाईका सबै पात्रहरू खुशी छन् - NLP मद्दत गर्दछ
अर्कोव्यक्तिगत विकास योजना के हो? - Use उपयोगी सल्लाहहरू
25 नेल्सन मण्डेला द्वारा प्रेरणादायक उद्धरण
50+ आकर्षण को कानून मा सुपर प्रेरणादायक उद्धरण
प्रेरणादायक उद्धरण, भनाइहरू र वाक्यांशहरू